Soo dejisan NetWorx 5.5.5 Standard iyo Portable – Vessoft
Soo dejisan NetWorx
NetWorx – software ah xisaabaadka gaadiidka iyo kormeerka la xidhiidha internetka. NetWorx taageertaa noocyada kala duwan ee xidhiidhada, cable, wireless ama via modem. Software ayaa awood u ah inay ku qiyaasto xawaaraha dhabta ah iyo xiriir load. NetWorx kuu ogolaanaya in aad si aad u eegto wararka maalin walba, toddobaadlaha ama bishii kasta, iyo heshid farriimaha hogaanka gaadiidka. NetWorx gubtay, khayraadka nidaamka yar oo uu leeyahay si fudud aad ku isticmaasho interface.
Xisaabaadka Traffic iyo kormeerka la xidhiidha internetka
Taageer noocyada kala duwan ee xidhiidhada
Ogeysiinta gaadiidka oo daarihiinna
Comments on NetWorx:
NetWorx Software la xiriira: